Fanafody voajanahary 5 hiadiana amin'ny tadin-doha | Bezzia
Tony Torres | 13/01/2022 20:00 | Fetsy hatsaran-tarehy
Mipoitra eo amin'ny hoditra ny tasy mihenjana rehefa mihinjitra be loatra ary tapaka ny fibra manome collagène sy elastin amin'ny dermis. Tamin'ny fotoana voalohany, ireo marika ireo dia aseho amin'ny feo mena na volomparasyvokatry ny fahatapahan'ny fibre. Aorian'izay dia lasa fotsy izy ireo ary mijanona eo amin'ny hoditra mandrakizay.
Rehefa mipoitra ny tadin-tseranana dia azo tsaboina izy ireo, azo hatsaraina ny endriny mba tsy ho hita ny marika. Rehefa tafapetraka anefa izy ireo, rehefa tonga fotsy dia tena sarotra ny manala azy. Na dia ny fitsaboana kabine lafo indrindra aza dia tsy manome vokatra azo antoka. Na izany aza, manatsara ny endriky ny hoditra azo atao, na miaraka amin'ny vokatra manokana, na miaraka amin'ny fanafody voajanahary toy ireo avelanay etsy ambany.
1 Ny fanafody tsara indrindra, fisorohana
1.1 Fanafody ho an`ny mihinjitra marika
Ny fanafody tsara indrindra, fisorohana
Ny marika mihinjitra, araka ny voalazantsika, dia vokatry ny fahatapahan'ny fibra amin'ny hoditra. Mitranga izany rehefa mihinjitra tsy ara-dalàna ny hoditra, matetika mandritra ny fiovan'ny lanjany tampoka. Mitranga koa izy ireo mandritra ny fitondrana vohoka, tsy noho ny fiovan'ny lanjany ihany, fa noho ny antony hormonina ihany koa. Ny antony hafa matetika dia ny fandovan'ny fototarazo, ny fihinanana fanafody sasany na ny sakafo tsy ampy izay tsy mahafeno ny otrikaina ilaina ho an'ny vatana.
Mba hisorohana azy ireo tsy hiseho marika maninjitra eo amin`ny hoditra, dia tsara ny mandray fepetra fisorohana. Ny voalohany sy manan-danja indrindra dia ny hydration, satria ny hoditra tsy misy rano dia mety ho malemy kokoa ary tapaka. Faharoa dia sakafo. Mihinàna sakafo voajanahary, araho ny sakafo isan-karazany, voalanjalanja ary antonony mba hifehezana ny lanjanao. Satria io no fanalahidy fahatelo sy fototra amin'ny fisorohana ny marika mihinjitra.
Ny fiovan'ny lanjany tampoka no tena antony amin'ny fisehon'ny tadin'ny hoditra sy ny tena manakana ny fitsaboana azy. Miezaha hitoetra amin'ny lanja ara-pahasalamana ary raha toa ianao ka hanaraka ny sakafo manify dia ataovy izay hahazoana antoka fa mahafeno ny sakafo ilainao izany mba hivoatra ny fatiantoka ary tsy hanimba ny hoditrao. Apetraho eo am-pelatanan'ny matihanina ny tenanao dia hahatratra ny tanjonao ianao.
Fanafody ho an`ny mihinjitra marika
Indraindray dia miseho ny marika mihinjitra na dia mikarakara ny lanjanao sy ny hoditrao aza ianao, noho ny antony samihafa. Amin'izay fotoana izay, azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireto fanafody manaraka ireto ho an'ny marika mihinjitra. Fanafody voajanahary sy an-trano izay hahagaga anao, mahareta ary tsy ho ela dia ho hitanao ny fahasamihafana.
Menaka amandy mamy. Produit natoraly manana fananana mamelombelona sy vitamin E izay mandefitra ny hoditra lalina.
Aloe vera. Tonga lafatra amin'ny fitsaboana ny tadin'ny mena sy ny fisorohana azy ireo tsy ho fotsy. Apetaho mivantana eo amin’ireo mason-koditra ny aloe vera, indroa isan’andro mandra-pahitanao fanatsarana.
Ranom-boasarimakirana. Manankarena vitamina C, antioxidant ary whitening effect. Poteho ny voasarimakirana, alona landihazo ary apetaho eo amin’ny tady mihinjitra. Avela hilona 15 minitra dia kobanina amin’ny rano matimaty.
Horsetail. Ho fanampin'ny tena mahasoa avy ao anatiny, ny horsetail ampiharina mivantana amin'ny hoditra dia manatsara ny endriky ny marika mihinjitra. Izany dia satria manavao ny selan'ny hoditra ary mamerina azy indray. Manomàna famafazana miaraka amin'ny kitapo roa ary apetaho eo amin'ny hoditra ny ranon-javatra, manotra amin'ny fihetsiketsehana boribory mandra-pahavitrihana.
Ny ovy. Ny ranom-boankazo manta dia tena mahasoa amin'ny fitsaboana ny tady. Izany dia satria izy io dia singa manampy amin'ny fanavaozana ny selan'ny hoditra. Tsy maintsy manapaka silaka ovy manta fotsiny ianao ary manosotra ny ranony amin'ny marika mihinjitra. Avela 15 minitra eo ho eo ary rehefa maina ny ranom-boankazo dia esory amin'ny rano mafana.
Mahagaga fa mandaitra ireo fanafodin’ny “stretch marks” ireo, fa mba hahitana ny vokatra, dia tena zava-dehibe ny tsy tapaka. Raha manao fanatanjahan-tena tsy tapaka koa ianao ary manaraka sakafo be voankazo sy legioma ary sakafo voajanahary dia hihatsara ny hoditrao avy ao anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fetsy hatsaran-tarehy » Fanafody voajanahary 5 hiadiana amin'ny tadin-tseranana